𝗣𝗮𝗻𝗰𝗮𝗸𝗲 𝗦𝘄𝗮𝗽 ကို 𝗣𝗿𝗼 ကျကျသုံးမယ် 𝗣𝗮𝗿𝘁 𝟮 (𝗛𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝗨𝗻𝘀𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗖𝗮𝗸𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗟𝗣 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗣𝗮𝗻𝗰𝗮𝗸𝗲𝘀𝘄𝗮𝗽) – Insure Market
𝗣𝗮𝗻𝗰𝗮𝗸𝗲 𝗦𝘄𝗮𝗽 ကို 𝗣𝗿𝗼 ကျကျသုံးမယ် 𝗣𝗮𝗿𝘁 𝟮 (𝗛𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝗨𝗻𝘀𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗖𝗮𝗸𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗟𝗣 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗣𝗮𝗻𝗰𝗮𝗸𝗲𝘀𝘄𝗮𝗽)
How to Unstake Cake and Remove LP token from Pancake swap (complete guide) မင်္ဂလာပါ။ Cryptoverse Myanmar ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ Crypto စျေးတွေလည်းကျနေတော့ ဒီအချိန်က‌ရောင်းဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဝယ်ထားတဲ့ Coin တွေကိုတော့ အတိုးရနေအောင် Stake ထားလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ လူတွေ Stake ထားရာကနေ ပြန် ပြီး unstake လုပ်တဲ့အခါ အခက်အခဲတွေ့တတ်ပါတယ်။ အဲတာလေးကို သေချာလေးရှင်းပြထားပါတယ်။…
How to Unstake Cake and Remove LP token from Pancake swap (complete guide)
မင်္ဂလာပါ။ Cryptoverse Myanmar ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။
Crypto စျေးတွေလည်းကျနေတော့ ဒီအချိန်က‌ရောင်းဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဝယ်ထားတဲ့ Coin တွေကိုတော့ အတိုးရနေအောင် Stake ထားလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ လူတွေ Stake ထားရာကနေ ပြန် ပြီး unstake လုပ်တဲ့အခါ အခက်အခဲတွေ့တတ်ပါတယ်။ အဲတာလေးကို သေချာလေးရှင်းပြထားပါတယ်။
(BSC Fees တွေအကုန်ခံပြီးတော့ လုပ်ထားတာ‌မို့ သေချာလေးကြည့်သွားနော် XD)
Binance လို Centralized Exchange မှာအတိုးနည်းတဲ့ Cake ကို Decentralized Finance ဖြစ်တဲ့ Pancake swap မှာ အတိုးတစ်လ ၅ ကျပ်တိုးကျော်ကျော် တစ်နှစ် ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရနိုမယ့်နည်းလေးကိုပြထားပါတယ်။ နောက်ပြီး LP (liquidity provider) လုပ်ပြီးအတိုးယူနည်း ပြန်ခွဲထုတ်နည်းကိုပါပြထားပါတယ်ဗျ)
၁. Trust Wallet တစ်ခု
၂. Trust Wallet ထဲမှာ BNB (BEP 20)5ဒေါ််လာခန့်
၃. Cake ကတော့ ကိုယ်ထည့်ချင်သလောက်ပမာဏ
(သတိပြုရန် – Pancake swap သုံးမယ်ဆိုရင် coin အကုန်လုံးက Bep 20 ဖြစ်တဲ့ Binance Smart Chain (BSC) ပဲဖြစ်ရပါမယ်။)
Part 1 Video လေးမကြည့်ရသေးပါက – https://youtu.be/oVzYqPmX7Fc
Trust Wallet အကြောင်းမသိသေးပါက
သိချင်တာမရှင်းတာရှိပါက Comment ရေးခဲ့လို့ရပါတယ်။
Telegram မှာ subscribe လုပ်ထားချင်ပါက
ကို Subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။
Binance အကောင့်ဖွင့်ရန်အတွက် Trade တိုင်း Trading Fees 20% Discount ရနိုင်မယ့်အောက်ကလင့်ခ် ကနေRegister လုပ်နိုင်ပါတယ်။ 20% ရမှသာရေရှည် Trade တဲ့အခါ Fees သက်သာမှာမို့ အကောင့်မရှိသေးရင် ဒီကနေ ဖွင့်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
Telegram Channel ကနေ သတင်းအသစ်တွေစောင့်ကြည့်လိုပါက
𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗽𝗮𝗴𝗲
𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹
ကျွန်တ်ောတို့ Channel လေးကို subscribe လုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် Crypto ဆိုင်အ‌ေခြေခံမှသည် အဆင့်မြှင့် Trading နည်းပညာများကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
#KBZpay #Binance #Crypto #P2P #Howtobuy #Myanmar #KBZpay #Binance #Crypto #P2P #Howtobuy #Myanmar #KYC #BinanceGuide #Myanmar #BinanceMyanmar #Cryptocurrency #CryptoverseMyanmar #KYC #security #KBZbank #P2P #NFT
Previous BLUEBBERY CHEESE CAKE! | MALA STARBUCKS
Next Trending Cake | केक की बिलकुल नयी डिजाइन New trick for cake decoration | easy cake decoration |Gokul
Copyright Market Insure coverage broking © All rights reserved. | 𝗣𝗮𝗻𝗰𝗮𝗸𝗲 𝗦𝘄𝗮𝗽 ကို 𝗣𝗿𝗼 ကျကျသုံးမယ် 𝗣𝗮𝗿𝘁 𝟮 (𝗛𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝗨𝗻𝘀𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗖𝗮𝗸𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗟𝗣 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗣𝗮𝗻𝗰𝗮𝗸𝗲𝘀𝘄𝗮𝗽)|Insure Market